Demandbase + jikota: Chọpụta Ndị Na-eme Mkpebi na Akaụntụ Ebumnuche | Martech Zone
Anyị na-aga n'ihu na-ede banyere uru nke Marketing-based Marketing (ABM). Ọ bụrụ na ị ghọtaghị ihe ABM bụ, anyị nwere kọwara ABM n'isiokwu ndị gara aga yana usoro dị mkpa iji mejuputa atumatu ABM gara nke ọma.
A ka nwere ihe ịma aka site na itinye n'ọrụ ABM. Ọ bụ ezie na 97% nke ndị na-ere ahịa B2B kọrọ na ha na-agba ọsọ ugbu a ma ọ bụ na-eme atụmatụ mmemme ABM na 60% nke ndị na-ere ahịa na-eji ABM iji tọghata akaụntụ ndị eburu n'uche na-eduga ma ọ bụ ohere, ihe ịma aka # 1 bụ enweghị ike ịchọpụta ndị na-eme mkpebi kpọmkwem n'ime akaụntụ lekwasịrị anya.
Demandbase na-enyere ndị ụlọ ọrụ B2B aka ịchọpụta na lekwasịrị anya n'akụkọ ihe kacha dị ha mkpa, wee zụta ha ahịa n'ofe dum. iwekota bụ onye na-eweta ngwanrọ ịre ahịa na ebumnuche iji kee ndị ahịa ahịa ngwa ọrụ, nghọta, na njikọta chọrọ iji gbanwee ụzọ ha si eme ka ọgbọ chọrọ.
Na ntinye aka emeputara n'etiti ha abuo, akuko gosiputara otutu aka site na Mgbasa Ozi Dabere na nmekorita nke software. Na-esonye ma na-eme ka mkpọsa ndị na-achọ ọgbọ gafee usoro okike nke ndị mmekọ mgbasa ozi iji mee ka ndị nwere oke nketa n'ime akaụntụ ndị ahụ wee mepụta ndu. A na-ebubata data ndu ruru eru na ngwa ahịa ahịa nke onye ahịa ka a gbanye ya ma gbanye ya n'usoro ire ahịa na ịkọghachi akụkọ nchịkwa Demandbase nke Akaụntụ Mgbasa Ozi.
Site na igbanwe usoro nke ochicho ichota, tinyekota oru oma na ihe ndi mmadu choro. N'ime ọrụ anyị na Demandbase, anyị na-eme ka ọ dị mfe na ngwa ngwa ịnweta data atụmanya dị mma nke na-akpaghị aka na nchekwa data gị, na-ajụ ndu ndị na-agaghị emezu njirisi gị ka ị wee nweta ihe ị kwụrụ. Ebe ọ bụ na ihe ngwọta anyị na-arụ ọrụ ngwa ngwa, ndị na-ere ahịa nwere ike ime ihe na-eduga n'otu ntabi anya na ndị ahịa agaghịzi etinye oge ịchụ nta maka onye ziri ezi na akaụntụ ha lekwasịrị anya. Jeremy Bloom, onye isi oche nke Integrate
Ntinye ihe ndi mmadu na - abanye n'ime ahia na ahia gi, na - enye gi ohere ịzụlite ma obu iru eru site na iji usoro di ugbua. Ihe nkowa ndi ozo banyere ihe nyocha a na A na-ahụ Mmekọrịta Demandbase n'ime ozi a ha mepụtara:
Tags: abmahia dabere na ahịaisi-alajikọtajeremy oge ntojundu nnwetaedu ndúnnweta olile anyaakpaaka elekerenjirimara njirimara
Mmetụta mgbasa ozi mgbasa ozi Rethink na Traffic na Commerce
Igodo 3 maka Szọ Nzụlite Azụmaahịa Nmadụ